Ixabiso eliphantsi lokuSebenza kweShishini le-17-24ft ye-HVLS yokuLungisa ifeni yomvelisi kunye nabathengisi | Uhlaselo
Ukusebenza okuphezulu kwi-Industrial 17-24ft HVLS yophahla fan enkulu kakhulu yevolumu yomoya
Umazibuthe osisigxina kaBejarm abalandeli bezombane abasebenzisa umbane basebenzise umgaqo osebenzayo woQeqeshiso oluVulekileyo oMagnethi ukuguqula umgama ojikelezayo ojikelezayo ube yimagneti ejikelezayo. Imveliso inezibonelelo ezininzi njengokulandela, ukusebenza okuphezulu, iTekhnoloji ekhokelayo, umthamo omkhulu womoya omkhulu.
Iwaranti ekhokelela kushishino ebomini
14 - 24 iinyawo ububanzi
Imagnethi esisigxina ye-motor brushless
Uluhlu olupheleleyo lolawulo olunokwazi ukusebenza kwenethiwekhi
Hlanganisa ngokulula kunye neendlela ezahlukeneyo zokukhetha
Imodyuli yokonga umbane
Uthotho lwee-Aeolus uthotho luhlobo olutsha lwabalandeli oluphuhliswe yi-bejarm esekwe kwi-PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) kwitekhnoloji; ubukhulu bayo bunokufikelela kwiimitha ezi-7.3. Ayisiyongxolo kuphela esezantsi njengee-decibel ezingama-38, kodwa xa zidityaniswe nesixhobo sokupholisa umoya, umoya wangaphakathi unokuxutywa ngokupheleleyo ngokulinganayo. Kumaqondo obushushu afanayo omzimba, linokunciphisa ixesha lokuqalisa leyunithi yomoya okanye licime ezinye iiyunithi zokupholisa umoya, ezinokugcina ngaphezulu kwama-50% ombane. Uthotho lwe-Aeolus lukhuthaza ukujikeleza kokuhamba komoya ngokusebenza okuphezulu kakhulu ukufezekisa injongo yokupholisa abasebenzi.
Uncedo lwe-HVLS-Kukunceda ugcine amandla
I-PMSM yoThinteloUkusebenza -Super kunye nokusebenza
Ukusebenza okuphezulu kunye nokusebenza ngokufanelekileyo
Usebenzisa eyona algorithm yokusebenza kakuhle, i-torque ripple isezantsi kakhulu kwaye ukusebenza kwayo konke kuphezulu.
Itorque enkulu enkulu kunye nevolumu yomoya
Indawo enkulu yokunxibelelana phakathi kwe-stator kunye ne-Rotor inika amandla okuqhuba kwaye azinzile.
I-Aeolus Series- Amaxesha afanelekileyo okufaka isicelo
Indawo yokusebenzela / yokugcina izinto / indawo yokudlala yangaphakathi / iZiko leMiboniso / ivenkile ye4S / Ivenkile enkulu yokuthenga kunye nesuphamakethi / Vestibule yesakhiwo seofisi / iMyuziyam / imisebenzi emikhulu yokuthengisa ngaphandle / iZoo kunye nearboretum / ibala lokudlala labantwana / Isitishi sikaloliwe / Isikhululo sikaloliwe esikhawulezayo / Isikhululo sebhasi / Isikhululo sikaloliwe ongaphantsi / Isakhiwo seTheminali
Egqithileyo Imveliso ephezulu yoShishino lwe-20-26ft HVLS yokuLungisa imisebenzi egqibeleleyo
Okulandelayo: Ukuthengiswa kwefenitshala enkulu ye-12-16ft enkulu
Umlinganiso omkhulu weCelling
Ukucofa iFan Blade
Uyilo maleko kabini iincakuba 10 Ifanele w ...